Xus Diimeedka Dunida Ugu Balaadhan Ee Dalka Hindiya Oo Ku Dhintay Tobanaan ruux | stn radio	Saturday, November 29th, 2014	Home
Xus Diimeedka Dunida Ugu Balaadhan Ee Dalka Hindiya Oo Ku Dhintay Tobanaan ruux
Feb 12, 2013 - Aragtiyood	Xus diimeedka ugu balaadhan dunida ee dalka Hindiya laba iyo tobankii sanadoodba marka lagu qabto, ayaa ku soo gaba gaboobay dhimashada 36-qof iyo tobanaan kale oo dhaawac ah, ka dib markii dadkii ka soo laabtay xus diimeedkaasi is jidheen.
Xus diimeedkan oo 12-kii sanadoodba mar lagu qabto dalka Hindiya waxa ka qayb gala in ka badan sodon milyan oo dadka Hindus-ka ah, kuwaas oo taga wabi ay aaminsan yihiin inay danbiga isaga maydhaan oo lagu magacaabo, Ganges River ama Yauma, kaas oo ay isugu tagaan dadkani.
Shilkan ayaa dhacay wakhti dadka badankoodu ka soo jeesteen goobtaas oo ay doonayeen inay tagaan guryahoodi halkaas oo tareen ay guryahoodi dib isugu noqon lahaayeen is jiidh ka dhacay ka dibna ay ku dhinteen lix iyo sodon qof sida masuuliyiintu sheegeen.
Dadkan oo wakhtigaas badankoodu u dabaal degayay ciida Hindus-ka ee lagu magacaabo, Kumb Mela, ayaa badankoodu ku dhintay saxmad iyo cidhiidhi ka dhashay xarun tareenada laga raaco, taas oo sababtay in dadka badankooda uu la dumo goob sida biriishka oo kale u dhisan oo ay ka gudbayeen sida afhayeen u hadlay booliska dalka Hindiya sheegay.
Ehelada dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaas iyo dad goob joog ahaa ayaa warbaahinta degaanka u sheegay in boolisku qayb ka ahaayeen dhibaatada, sababtoo ah waxa ay boolisku dadka ku fureen waxyaabo ay doonayeen inay ku kala didiyaan wakhtigii biriishku kala jabay taas oo khasaaraha sii kordhisay.
12-kii sanadoodba waxa mar magaalada Allahabad ee dalka Hindiya isugu taga tobanaan milyan oo qof oo ka tirsan dadka Hindus-ka loo yaqaano kuwaas oo aaminsan in ay wabi goobtaas ku yaala isaga oo maydhayaan danbiga.